Ilhaan Cumar oo ka mid noqotay xubnaha Aqalka Cad ee Mareykanka – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaIlhaan Cumar oo ka mid noqotay xubnaha Aqalka Cad ee Mareykanka
Hiiraan Xog, lhan Omar ayaa ku guuleysatay tartanka gobolka 5th ee Minnesota, waa qofkii ugu horreeyay oo Soomaali ah oo k amid ah noqda Aqalka Congress-ka ee dalka Mareykanka, waxaa ay guushaasi ka gaartay doorashaddii dhexe ee Mareykanka ee shalay dhacday.
Ilhaan Cumar ayaa bedeshay Keith Ellison oo ahaa Muslimiinkii ugu horreeyay ee ka mid noqota Aqalka Congress ,islamarkaana kasoo galay dhanka Minnesoto.
Ilhan Cumar ayaa taariikh samaysay iyada oo noqonaysa gabadhii ugu horreeysay ee loo doorto Congress-ka oo Soomaali ah.
Waxay Soomaaliya ka qaxday xilligii dagaalka sokeeye iyadoo 8 sano jir ah
Muddo afar sano ayay ku nooleyd xerada qaxootiga ee Dhadhaab
Waxay Maraykanka tagtay iyadoo 12 sano jir ah
Eryada Ingirriska ee ay garaneysay markii ay Maraykanka gaartay waxay ahaayeen “hello” iyo ”aamus” oo kali ah
Waxay noqotay qofkii Soomaaliga ahaa ee ugu horreeyay ee lagu doorto Maraykanka.
Wafdi ka socda dalka Turkiga oo ku soo wajahan magaalada Muqdisho